Wararka Maanta: Khamiis, Oct 11, 2018-Addis Ababa: Ciidamo gadoodsan oo tagay xafiiska Abiy Axmed
Ciidamadan oo ah kuwo siggaar ah u tababaran ayaa loo oggolaaday in ay hor tagaan xafiiska Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, xaaladdaas ayaa keentay in waddooyinka qaar la xiro.
Balse markii uu Ra'iisul wasaaruhu uu soo baxay si uu ula kulmo boqollaal kamid ah ciidamadda dalkaas oo ku labbisan dareeska kuma aanu farxin in qaarkood ay dareen dhaliyeen hubkii ay siteen,sidaas darteed wuxuu faray in ay kac fadhiistaan oo ay jimicsi sameeyaan, taas oo ciqaab ku ahayd ciidamaddii hubaysnaa.
Fitsum Arega oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya, wuxuu sheegay Abiy inuu si taxadar leh u dhagaystay cabashadda ciidanka, kulankana uu ku dhammaaday ballan-qaad iyo si habboon in loo tixgelin doono dalabka ciidamadda.
"Ra'iisul wasaaraha wuxuu u sheegay askarta in sidan si ka duwan mustaqbalka usoo gudbiyaan cabashooyinkooda." ayuu yiri Arega.
Telefishanka Qaranka (ETV) ayaa dhankiisa baahiyay in kulanku uu dhammaaday "heshiis", laakiin ma uusan bixin faahfaahinta natiijada. Marka laga soo tago codsiga mushaar bixinta, askartu waxay waydiisteen Abiy in "dib uhabeyn lagu sameeyo dhismaha ciidamadda milatariga Itoobiya.".
Dadka deegaanka ayaa sheegay in internetka la xidhay ku dhawaad ​​saddex saacadood galabnimadii Arbacada. ETV ayaa sheegay in loo xiray si looga hortago wararka been-abuurka ah ee lagu baahiyo warbaahinta bulshada.
Abiy oo 42 jir ah, ayaa xafiiska la wareegay bishii Abriil waxa uu marka ballan-qaaday in uu dib-u-habeeynayo ciidamadda ammaanka isla markaana kor u qaadi doono dimoqraadiyadda.